[updated] Avela mandositra i Andry Rajoelina fa tsy manaiky an'izany!
2009-02-03 @ 10:47 in Politika
Araka ny tsikaritra dia tsy misy mihitsy ny fahamehana avy amin'ny mpitondra fanjakana ara-dalàna amin'izao fotoana izao hisambotra ny Ben'ny tanànan'Antananarivo. Raha ny fandehan'ny raharaha amin'izao fotoana izao dia mihena am-pitoerana toa fen'antitra ankehitriny ny manaraka azy manatrika eny amin'ny kianjan'ny 13 mey. Nandrasana fatratra ny ho fihetsiky ny mpitandro ny filaminana sy ny mpiasan'ny minisitera omaly alatsinainy ahafantarana hoe manaraka ny "baikon'iza" moa izy ireo. Velona amin'izay ny teny tamina radio anankiroa fa "tsy afa-nivoaka" ny mpiasa tany amin'ny minisitera satria "nambenan'ny" miaramila. Tsy naheno zavatra mampihomehy tahaka izany indray aho raha tamin'ny fotoana nahenoako izany fitenenana izany. Hay ve dia tena gadra tahaka izany indray ireto mpiasan'ny minisitera ireto nefa nalalaka mihitsy tsy hiditra ny birao akory. Hay ve izany dia tsy nanaraka ny baikon'ny mpitarika ny fitondrana tetezamita akory ireto mpitandro filaminana ireto. Hay ve mandritra izany fotoana izany dia mbola manana ny fahefany sy ny heriny soa aman-tsara ny governemantan-dRabemananjara Charles.
Maro ny olona no mitaky ny hisamborana ny Ben'ny tanànan'Antananarivo amin'izao fotoana izao eto Antananarivo, fa izay miresaka amiko kosa no anazaako fa tsy tombotsoan'ny fanjakana velively ny hisamborana azy amin'izao fotoana izao. Io moa dia araka ny efa nosoratako rahateo ao amin'ny hoe "Antso avo ho an'ny mpitondra, arovy i Andry Rajoelina" ary ifaliako indrindra fa teto amin'ny Maharesaka VETO no namoaka izany hevitra izany hovakian'ny hafa voalohany indrindra. Hanome hery ny TGV sy ny mpanaraka azy amin'ny fony manontolo indray izany... hita kosa fa misy fiantraikany ihany ny fahandrasana tantana ataon'ny mpitondra. Raha eny amin'ny toerana mbola ahafahana miresaka sy mivorivory amin'izao fotoana izao aloha dia tsy mahazo ny fon'ny mpankasitraka azy teo aloha nefa tsy "fanatika" intsony ny Ben'ny tanànan'Antananarivo. Ny mbola mahavariana izany amin'izao fotoana izao raha tsy maika ny hisambotra ny Ben'ny tanàna ny eny amin'ny Fitsarana sy ny any amin'ny Minisiteran'ny Fitsarana, dia ny tsy faneken'i Andry TGV velively fa "resy" izy na "andalam-paharesena". Vinaniana noho izany fa manana tanjona hafa hokendrena mihitsy izy.
Malaza hatry ny ela moa fa resaka fifanolanana teo amin'ny fianakaviana niitatra ho tonga eo amin'ny sehatry ny firenena firenena izy ity nefa andeha ajanona ho tsahotsaho hatrany izany. Hotazonina hatrany eto ny hoe manana tanjona tratrarina izy, efa nolazaina izany tany alohaloha tany fa mitady ho adinodino amin'izao fotoana izao. Mbola misalasala anefa aho hoe ny inona amin'ireto tanjona roa samihafa ato an-tsaiko ireto no tena izy sa izy roa miaraka mihitsy ve? Raha niteny ary i Andry omaly hariva tao amin'ny fitaovan-tseraserany fa efa miala any ny hanoloana ny Ben'ny tanàna ho delegasiona manokana dia gaga ihany ny tena. Raha ny fijeriko ny paikan'ny mpitondra amin'izao fotoana izao dia tsy maika amin'ny fanoloana ny Ben'ny tanàna izany ry zareo ary tsy tokony hiraparapa amin'izany mihitsy. Tetika avoakan'i Andry indray io filazana tsaho io, noho izany, hanintonana ny olona hiandany aminy indray... tsy nohamarinin'ny fitaovan-tserasera hafa mihitsy anefa io filazan'ny Ben'ny tanàna io. Miezaka ny mandrehatra afo hatrany i Andry saingy ho hita eo ihany ny tohiny. Lazain'ny radio don bosco manko amin'ny fotoana anoratako (12:12) fa mbola nihena (noho ny omaly) ihany ny olona tonga (noho ny faneriterena mahazo ny mpiasa!). Tanjona iray izany ny hanakorontanana hatrany ny toe-draharaha rehefa tsy hosamborina izy. Tsy hijanona amin'io mihitsy izy raha mbola misy mpanaraka etsy amin'ny 13 mey hatrany (ary ataoko fa tsy ho foana velively izany mpanaraka ny TGV izany).
Ny tanjona faharoa, na ny tena kendrena ao anatin'ny fanakorontanana araka izay tratra ny toe-draharaha politika amin'izao fotoana izao dia ny handiso ny fampilaharana an'i Madagasikara ho ao anatin'ny toerana 40 tsara tsidihan'ny mpizaha tany indrindra. Atao izay hialan'ny mpandraharaha vahiny (tsy frantsay?) rehetra eto Madagasikara, ary tsy hidiran'ny mpandraharaha hafa ho eto Madagasikara... mbola lesoka koa etsy andaniny ny angovo hampandehanana izay mety ho fandraharahana hatao eto Madagasikara. Fa ny tena mahamaika indrindra dia ny hanafoanana ny fivoriana faratampony (vovonana) roa izay kasaina hotontosaina eto Madagasikara amin'ity taona ity sy amin'ny taona ho avy. Raha izao kiry izao no jerena dia tsy ny hitantana ny firenena velively no kendreny (diso hevitra ny mpanao politika raha mino an'i Andry amin'izay foto-kevitra tetezamita izay) fa ny hampiatoana ny asa sy ny foto-drafitr'asa mifandraika amin'ny fandraisana ireo vovonana roa ireo, sy izay mety ho fampandrosoana ny firenena rehetra mandritra ny fe-potoana itondran-dRavalomanana. Nisy mpitantana foto-drafitrasa lehibe iray izay nahazo fandrahonana an-telefonina, tamin'ny sabotsy alina, hampiato avy hatrany ny asa ataony fa ny mpitondra tetezamita izao no mitantana ny firenena... Hatramin'izao fotoana izao izany aloha dia mbola tsy tratran'i Andry ny "hanasaziana" an'i Madagasikara tsy handray ireo vovonana (Afrikana sy mpiteny frantsay) roa ireo ka izany no hikirizany hatrany amin'ny diany ankehitriny. Mampanahy ihany anefa ny toe-draharaha fa efa misy mikitikitika mihitsy amin'izao fotoana izao ny hamindrana toerana ny vovonana hiala an'i Madagasikara... fa raha tontosa io famindran-toerana io dia "Nahazo ny fandreseny i Andry Rajoelina". Asa kosa aloha izay hevitrareo fa hevitro manokana io.
fanampiny: Mazava loatra fa tsy maintsy misy ny hevitra hafa mivoaka araka ny toe-draharaha. Efa naheno ity fanapahan-kevitra ny hanalana azy tsy ho Ben'ny tanàna intsony ity i Andry Rajoelina raha efa niresaka izany tamin'ny fitaovan-tseraserany. Eny , azo ekena hitsapana ny halalin'ny rano amin'izay ho fihetsehan'ny mpanohana ny TGV io fanapahan-kevitra noraisina io. Avy eo ho hita indray izay ho fandehan'ny raharaha. Ny manam-bava moa na inona na inona mitranga tsy maintsy mahita holazaina foana hamelezana ny mpitondra. Fa dia hafa tokoa ny nolazain'i Andry nandritra ny kabariny: "Ataovy raha sahy!" hoy ny teniny... mitovitovy amin'ilay fahadisoam-pitenenana nataon'ny filoham-pirenena ihany ka nampihetsika ny hambom-pon'ny TGV tamin'izany fotoana izany. Efa hanangana ny governemantany koa anie ny TGV sy ny tariny ka aleo hosahaniny aloha izany fa tsy mety ny ho sady Ben'ny tanàna no Prezidà e! sady tsy mifanaraka amin'ny lalàna misy rahateo koa izany toe-javatra idiran-dRajoelina izany. Dia tsy maintsy hitabataba ihany koa izy rehefa avy "nitety faritra" fa be tokoa ny olona mpanaraka azy.
Etsy ankilany, mbola namoaka "joker" hafa ihany koa ny TGV ary eto dia heveriko fa misy fifanarahana na tsirin-kevitra avy amin'ny mpialokaloka any Frantsa mihitsy handefasana an'i Rossy hanetsiketsika sy hanentana ny eny amin'ny 13 mey amin'ny Sabotsy 07 febroary 2009 ho avy izao, fotoana hametrahana ny governemanta tetezamita izay hatsangan'i Andry... Efa ela tsy nihira teto an-tanindrazana tokoa ny lehilahy ka tsy maintsy ho maro ny sokajin'olona ho voatarika amin'izany ka hahatsapa indray ny "ambiance" anaty fety fananganana governemanta mirazotra. Antsy roa lela ho an'i Andry sy ny tariny ihany anefa ny fakana an'i Rossy hihira izay. Efa nambarako teto amin'ny bolongana ihany fa efa mpandeha sy mpiverimberina tao amin'ny Radio Viva ihany izany hiran'i Rossy izany... ary hihamivaingana eo anatrehan'ny olona (araka ny eritreritry ny olona) fa tena Ratsiraka sy ny tariny mihitsy no ao ambadik'ilay zalahy ity. Ary ny fikarohana "joker" tahaka izao no mety nahatara lava an-dranamana tao ho ao ka efa dify hatrany ny mitataovovonana vao indro ny lehilahy miditra eny an-kianja. Fitsapana ho an'ny mpanohana an'i Andry mahita tsikelikely izay mipoitra any ambadika any koa ity fotoana ity... ary nolazainy moa fa ho avy miaraka amin'ny fanamiana ihany koa ny miaramila miara-dia aminy. Enga anie ho miaramila am-perinasa no ho tonga eo fa tsy miaramila misotro ronono toy izay tsikaritra tamin'ny 1991 (vao 18 taona ialahy amin'ity taona ity raha teraka tamin'izany taona izany).
Raha izay no tarafina dia samy tsy maika hamita ny raharaha haingana indray ny roa tonta fa samy miandry hoe izay leo voalohany eo fotsiny. Manontany tena ihany aho hoe dia tsy hihetsika mihitsy ve ny mpanohana ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao. Mieritreritra aho fa fotoana ihany koa io amin'ny Sabotsy 7 febroary io hanehoany ny hamaroany sy ny tanjany satria tsy maintsy ho roboka amin'i Rossy ihany ireo mpanohana ny TGV fa tsy hitetateta hanakorontana toy ny tamin'ny alahady 25 janoary 2009 iny. Fotoana mifanindry ihany no tena mety amin'io fotoana io fa tsy hoe alahady indray izay hananan'ny TGV fotoana hanakorontanana ny tanàna sy ny firenena.
Fa mahavariana dia mahavariana ny tenin'i Andry nandritra ny valandresaka nilaza ny masoivoho vahiny rehetra eto Madagasikara :"tsy hivoaboaka intsony fandrao misy loza manjo azy ireo (?)". Loza...
jentilisa 03 febroary 2009